Pesta sy tsaho : Tsy tonga ara-potoana amin’ny vahoaka ny tena vaovao marina | Ny Valosoa Vaovao
Pesta sy tsaho : Tsy tonga ara-potoana amin’ny vahoaka ny tena vaovao marina
Na inona na inona tenenina dia tsy nanao ny andraikiny araka ny tokony ho izy ny fanjakana matoa nihisatra ny ady tamin’ny Pesta . Miala bala hatrany no nataon’izany fanjakana izany izay vao maika mampihitatra ny olana . Angamba raha tsy nisy ny vola fanampiana avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia niahaka teo ny mpitondra malagasy . Ny tsy fahaizan’ny fanjakana mifehy sy mampiasa ny fifandraisana na ny « Communication » no tena niteraka izao fitarazohana amin’ny ady amin’ny Pesta izao . Tsy tonga arapotoana any amin’ny vahoaka ny tena vaovao marina ; indraindray dia ireo mpanao gazety vahiny eto Madagasikara no mandefa ny vaovao mialoha kanefa ny fanjakana no mifehy ny TVM sy RNM . Ny dikany dia variana amin’ny zavatra hafa ny mpitondra saingy rehefa nirongatra ilay atao hoe aretina Pesta izay vao nikoropaka. Tsy izany tompoko no atao hoe : mitondra firenena! Maro ny aretina izay mitranga aty Afrika fa izao no azo marihana : misy izany atao hoe Ebola izany izay tsy mbola misy eto Madagasikara , mahafaty io aretina io ; ny Pesta kosa dia azo tsaboina tsara raha hita hatrany amin’ny voalohany ilay aretina , maimaimpoana ny fitsaboana sy ny fanafody ary tena sitrana ilay olona . Raha izany no izy dia tsy tokony hisy ny olona maty fa ny tsy fandraisana andraikitra no betsaka . Tsy tonga any amin’ny olona ny marina izay ny fanjakana no tomponandraikitra voalohany tokony hanao izany andraikitra izany hany ka mahazo vahana ny tsaho na ny « Rumeur » hoy ny Frantsay . Ny dikany dia tsotra : manaporofo ny tsy fahaizan’ity fitondrana ity ny fielezan’ny tsaho momba ny Pesta . Ankoatra izay dia misy koa ny aretina izay azo arovana amin’ny vaksiny dia ny Polio saingy tsy mbola tontosa ny famongorana azy ankehitriny . Hiditra amin’ny hetsika fanaovam-baksiny andiany faha 11 ny eto Madagasikara manomboka ny 22 Novambra 2017 . Mbola resaka tsy fahatomombanan’ny fifandraisana sy ny fandresen-dahatra ny vahoaka hatrany no mahatonga ity aretina ity mbola misy eto Madagasikara hatramin’izao satria tsy tsapa ny fiovam-pihetsika eo amin’ny vahoaka, izany hoe tsy maharesy lahatra azy ny fanentanan’ny fanjakana . Ny fanjakana mihitsy no mila manao fiovam-pihetsika raha ny fandehan’ny raharaham-pirenena, sa ahoana hoy ianao ?